Dawladda oo soo bandhigtay fikirro lagula dagaalamo nazismada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Roger Haddad (L), Andreas Carlson (KD), Johan Hedin (C) iyo Tomas Tobé (M) uu ku sii socda wasaaradda cadaaladda iyo wada-hadallo la xiriira ka hor-tagga nazismada. sawir: Claudio Bresciani/TT
Nordiska motståndsrörelsens (NMR) hejdas och omringas av polis efter ett utbrytningsförsök under demonstrationen på lördagen.
Ciidanka ammaanka oo joogsi u dhigtay bannaan-ixii ururka Nordiska motståndsrörelsens (NMR) ee ka dhacay dhowaantan magaalada Göteborg. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Dawladda oo soo bandhigtay fikirro lagula dagaalamo nazismada
Ciidammada nabad-gelyada oo howlo loo xil-saarey
La daabacay torsdag 12 oktober 2017 kl 08.30
Dawladda ayaa soo ban-dhigtay liis ey ku qoran yihiin fikirradeeda la xiriira sidii looga hor tegi lahaa dadyoowga aamin-san nidaamka naziismada.
Waxaa baaris loo saarey isticmaalka mamnuucidda astaamaha naziismada iyo xuquuq ciidanka ammaanka loo siiyo inuu go’aamiya shuruudaha bannaan-baxa.
Inta aan doorashada la gaarin waxaa ciidanka ammaanka loo xil-saaray sidii uu ku xoojin lahaa howlihiisa ka hor-tagga xoogagga ka soo hor-jeeda nidaamka dimoqoraadiyadda.
Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson (S) ayaa horay u heeystay liis fikirro la soo diyaariyey kolkii uu la kulmayay xisbiyada garabka midig ee Alliansen-ka iyo xisbiga Vänsterpartiet. Iyada oo goolka laga lahaana uu ahaa sidii looga doodi lahaa howlaha loo baahan yahay in wax laga qabto iyo sidii looga hor-tegi lahaa xoogagga bulshada ka dhex aloosan ee ka soo hor-jeeda nidaamka dimoqoraadiyadda, gaar ahaan naziismada. Qaar badan ayaa ka carooday bannaan-bixii ururka naziistada ee Nordiska motståndsrörelsen (NMR) uu dhowaantan ku qabtay magaalada Göteborg.
Dawladda ayaa iminka u xil-saartay ciidanka ammaanka iyo nabad-sugidda Säpo sidii ey u dardar gelin lahaayeen howlaha ka hortagga kooxaha dagaalada u xagliya iyo xag-jirrada.
-Waxaannu leennahey: Xooggiina isugu geeya sidii aad gacanta ugu dhigi laheydeen shakhsiyaadka la hadal hayo, sida uu sheegay Morgan Johansson.
-Waxaa loo baahan yahay in gacan adag lagu dhigo mar haddii la guda galey sannad doorasho, waa iney ciidanka ammaanka iyo nabad-sugiddu u diyaar yihiin.
In sharciga wax laga bedelo
Roger Haddad oo ka tir-san xisbiga Liberalerna ayaan dawladda ku raacin fikirradii ay kulanka ku soo ban-dhigtay, isagoona sheegay in xeerku iminkaba awood u siinayo in laga hor tago, halkii farafareeyn lagu sameeyn lahaa.
Af-hayeenka siyaasadda cadaaladda ee xisbiga Center-ka Johan Hedin ayaa aamin-san in fikirrada dawladdu ey yihiin kuwo salka ku haya doodihii horay u socday.
-Waxay ila tahay in laga sii adkeeyn karay, sida uu sheegay. Isagoona farta ku fiiqay xeerka kullammada iyo maqal la’aanta hayadaha ammaanka.
Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson ayaa aamin-san in fikirradii dawladda la soo dhoweeyey iyo fikirradii dhammeeystirka oo ey soo bandhigeen xisbiyada kale.
Af-hayeenka xisbiga Moderaterna ee siyaasadda cadaaladda Tomas Tobé ayaa sheegay inuu ku qanac-san yahay kulankii maanta, isagoona albaabbada u furay shuruucda oo wax laga bedelo:
-Waxay ila tahay in loo baahan yahay marka hore in laga bilaabo eegista xeerarka maanta jiraa waxyaabaha ey arrinkan ka qaban karaan. Waa mid loo baahan yahay in ciidanka ammaanka iyo nabad-sugidda la siiyo awood ka ballaaran, sida uu sheegay Af-hayeenka xisbiga Moderaterna ee siyaasadda cadaaladda Tomas Tobé